मा स्थित भूमध्य द्वीप विश्वभरिबाट पर्यटक लामो lures लाखौं छ। रोचक संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारक, प्राचीन को निशान भण्डारण संग एक अद्वितीय क्षेत्र, अचम्मको प्रकृति - यो सबै भन्दा मनमोहक छुट्टी गन्तव्य सुरम्य रिसोर्टमा बनाउँछ।
Troodos पहाड दायरा
सदाबहार संग व्यस्त पहाड दायराको द्वीप राष्ट्र इलाका को आधा भन्दा बढी र एक सय लागि stretching अप रुचि छैन घाम साइप्रस कोमल ढलान संग पहाडी किलोमिटर।
Troodos माउन्टेन, को पर्यटन केन्द्र को दिल मा स्थित छ, मनोरम परिदृश्य द्वारा मारे। पर्वतमा दायरा राज्य बाँकी देखि मौलिक liberated लामो Serpentine सडक, सफा हावा, पुरातन चर्च र आरामदायक गाउँमा fascinates। यो तपाईं कहाँ देख्न कति सुन्दर साइप्रस एक विशेष स्थान छ।
Troodos - एक सय मिलियन वर्ष पहिले भन्दा बढी जमीन मा भयो कि ज्वालामुखी प्रक्रियाहरू को एक उत्पादन। हिमालहरू वरिपरि गठन द्वीप अचम्मको अनुपम वनस्पतिहरूको, पानी सतह माथि, बौरिउठ्नुभएको छ।
Troodos (साइप्रस) प्रसिद्ध wetter जलवायु, देखि वर्षा को मात्रा वृद्धि भएको छ, र औसत तापमान समतल भूमि सतह मा भन्दा, 10 डिग्री तल छ। तातो मौसममा, यहाँ एक पाइन वन को छाया मा लुकाउन साइप्रसबासीहरूलाई आउनुहोस्। खैर, यहाँ गर्मी मा, तर पनि विजयी द्वारा मात्र होइन निहित छ, छिमेकी सहर मा गरिएको हो।
सबै भन्दा उत्तेजक महिना - जुलाई र अगस्ट, तर हिउँदमा तापमान छ डिग्री माथि उठन छैन। डिसेम्बर उच्चतम वर्षा लागि रेकर्ड रूपमा मान्यता छ।
पर्वतमा गाउँ तपाईं साइप्रस मा आराम गर्न flown पहिलो दृष्टि पर्यटकहरु मा प्रेम पर्नु भनेर सुरम्य छ। Troodos - हिमालहरू, तर पनि ब्रिटिश को शासनकालमा क्षेत्रमा देखा गरेको सुन्दर रिसोर्ट्स मात्र छैन। भूमध्य र मिश्री Korol Faruk को धनी परिवार रोजेका शान्त क्षेत्र पनि एक विशाल विला किनेको। राज्य को अध्यक्ष को गर्मी निवास पनि छ।
कुनै तरिकामा पहाड छुट्टी बीच रुचि गर्ने तटीय लिइरहेको अतिथि को आराम गर्न कमसल छन् होटल को ढलान बनाए।
जाडो र गर्मी चल्छ
यो हिउँ फल्स र पर्यटकहरु धेरै खुशी संग स्की गर्न जहाँ रिसोर्ट मा मात्र स्थान हो - Troodos पहाड (साइप्रस) प्रेरित गर्छ। उच्चतम शिखर मा Olympos अतिथि लागि सहज लिफ्टहरु बनाए। क्षेत्र मा गर्मी महिनामा धेरै टाढाबाट हिउँ पहाड पैदल बाट देखिने छन्, एक विशेष राखे बाटो मा द्वीप को अतिथि, मनसायलाई रिज को अद्भुत प्रकृति थाह अनुमति। पर्यटकहरु यो लम्बाइ बदलिने सुखद अनुभव को एक धेरै छोड्दा चार मार्गहरू मार्फत पाँच घन्टा एक आकर्षक यात्रा गर्न लिन्छ भन्न।
Olympos नजिकै स्थित एउटा सानो क्षेत्र - को पैदल पहाड दायराबाट नै नाउँ वहन कि गाउँ बाट सुरु हुन्छ। पर्यटकहरु भन्न इटालियन धेरै समान स्थानीय दृश्यहरु छ।
द्वीप को पहाड मार्फत यात्रा, अतिथि आफ्नो शानदार दृश्य लिन जो अद्भुत गाउँमा परिचय, र प्रत्येक यसलाई भ्रमण गर्न लायक छ। सायद सबैभन्दा तिनीहरूलाई को प्रसिद्ध - लागि सिर्जना भने Omodos, साँघुरो सडकमा मार्फत चलाउँछ। Limassol गाउँ को जिल्ला स्थित अद्भुत दाखबारी लागि प्रसिद्ध छ, र circling उनको टाउको intoxicating पेय आवश्यक सबै अतिथिहरू स्वाद। अगस्ट मा, पर्यटकहरु विभिन्न प्रतियोगिताहरु र मनोरञ्जन मा भाग लिन मात्र होइन परम्परागत मदिरा र राष्ट्रिय व्यञ्जन स्वाद जो आनन्दित छुट्टी, मा प्राप्त, तर पनि।
तर सायद Omodos को मुख्य आकर्षण पवित्र क्रस चर्च को ढुङ्गा को निर्माण गरिएको छ। ख्रीष्टको बांध कि डोरी एक खण्ड र पवित्र क्रस को एक कण: यो साइप्रस को सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानहरू, मन्दिर भित्र भण्डारण ज्ञात महत्त्वपूर्ण अवशेषहरूको छ। Shrines, चतुर्थ शताब्दीमा एउटा सानो गाउँमा फन्दामा, को iconostasis मा स्थित छ, अगाडि जो को Troodos (साइप्रस) मा फरक भागबाट आउन जो विश्वासी stiffen।
फोटो गाउँ पुरानो पत्थर घरहरू पनि चम्किरहेको हिउँ ढाकिएको जब जाडो, मा पर्यटकहरु गर्न प्रेम।
नाम संग Agros गाउँ - यो वकर लागि वास्तविक expanse छ। रक्सी त्यहाँ संलग्न छैन, तर पर्यटकहरु सबै भन्दा राम्रो भनेर थाहा गुलाब पानी, पाक लागि डिजाइन यो स्थान बनेको छ। उत्पादन सुन्दर ग्लास बोतल कि पर्यटकहरु एक स्मारिका रूपमा किन्न मा बोतलबंद छ।
गाउँमा मांग ब्रान्डी र liqueur, पत्रदल गुलाब गरिएका छन्, र अतिथि Agros द्वारा पहिचान, यो अविश्वसनीय छ स्वादिष्ट पेय, त्यसैले कुनै पर्यटक स्थानीय कारीगरों को उत्पादन बिना छोडेर।
स्पष्ट पुष्टि - को चेरी रूखहरू Pedoulas मा गाउँ बीच बाहिर फैलाउन - Troodos (साइप्रस) सारा संसार अद्भुत परिदृश्य र यात्राको एउटा नयाँ बिन्दु चिनिएको छ। सायद यो गर्मी पर्यटकहरु राज्य जहाँ भीड को सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ मध्ये एक हो। मैत्री मान्छे, सफा पर्वतमा हावा, फूल उद्यान र रूखहरू, को नम्र जलवायु आकर्षित विदेशी आगंतुकों, र धेरै संग्रहालयहरु एक यूनेस्को विश्व सम्पदा छ जो चर्च Arhangela Mihaila, संस्कृति प्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्छ।
गाउँमा दिने शान्ति र सौहार्द बारेमा प्रशंसा संग पर्यटकहरु। Pedoulas विशेष वातावरण हलचल शहर र bustle तिनीहरूलाई द्वारा सिर्जना देखि विश्राम लागि आदर्श छ।
Lefkara को होटल्स
को तलहटी मा Nestled गाउँमा, घाम साइप्रस भर यसको embroiderers लागि प्रसिद्ध। पर्यटकहरूले सबैभन्दा सुन्दर उच्च गुणस्तरीय बेल, तपाईं यस शान्त कुनामा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह छ। स्थानीय needlewoman पनि हाम्रो आफ्नै कढाई, रूप "lefkaritika" ज्ञात विकास गरे। निस्सन्देह, बेल उत्पादन सस्तो नहुन सक्छ, तर अतिथि राज्य को मूल्य आपत्ति छैन। तर, एक आरामदायक गाउँमा भएको सबै मानिसहरू सम्झौता प्रेम भन्न, र तपाईं बन्द चाहेको यदि तेस्रो द्वारा मूल्य फेंक गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, स्थानीय needlewoman वास्तविक lefkariyskaya कढाई कहिलेकाहीं छ रूपमा पर्यटक लाग्यो, बेज, सेतो छैन को canvases मा विशेष गरेको छ चेतावनी।
यात्री को हिमाल मा उच्च मन र सद्भाव को शान्ति पाउन, र साइप्रस को दावा जो यस प्राचीन धार्मिक स्मारक, तिनीहरूलाई मदत गर्न सपना। Troodos निर्माण को यस प्रकारको मा धनी छ, र मन्दिर दर्जनौँ धेरै लोकप्रिय छन्। जहाँ कुनै सडक थिए रिमोट ठाउँहरू, तिनीहरूले अझै पनि पूर्ण कारण एक सुरक्षित स्थानमा बसोबास तथ्यलाई गर्न संरक्षित छन् जो monasteries, निर्माण गर्ने आश्रय बासिन्दा, भेटिएन।
मुख्य धार्मिक जटिल यूनेस्को द्वारा संरक्षित Kykkos छ। XI को पालो मा स्थापित - XII शताब्दीपछि, संसारको एक बच्चाको गर्ने सपना वरिपरि बेल्ट, चमत्कार को doers, र महिला निर्माण लागि प्रसिद्ध, बाँझोपन निको पार्न यहाँ आउनुहोस्।
तर Kykkos को मुख्य धन ठीकै बाइजान्टियम को प्रतिमा प्रसारित एकान्तवासी-भिक्षु सम्राट् भनिन्छ गर्न सकिन्छ। यो जो तीन shrines मध्ये एक छ सेन्ट लूका स्वयम्ले भर्जिन मरियमलाई लेखे।
अद्वितीय Troodos (साइप्रस), जसको आकर्षण वैविध्यपूर्ण र एकदम रोचक छन्, छुट्टै यात्रा योग्य, त्यसैले शानदार रिसोर्टमा भ्रमण गर्नेहरूलाई, एउटा यात्रा मा जाने निश्चित हुन, र यो outing को सम्झनाहरु लामो पर्यटकहरु को मन haunt हुनेछ।
सोची मा गर्न कुराहरू: पानी पार्क, क्लब, मनोरञ्जन, समुद्र तट
क्युबा: हवाना आकर्षण र मात्र
शुरुआती लागि एक्सप्रेस-शैक्षिक कार्यक्रम: हामी वायदा मा कमाउन। संघीय ऋण बन्धन र प्रयोगको
धुलाई साबुन - साबुन भन्दा बढी
यो मेंहदी रंगे बाल रंग गर्न सम्भव छ? यो एक बेरंग मेंहदी पहिले रङ लगाइएको कपाल डाई रंग गर्न सम्भव छ?
आधुनिक रूस दुर्लभ सिक्के: तस्बिर संग सूची
काठ - एउटा अचम्मको धन, मानिसको प्रकृति देखि एक उपहार